သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေ Rework ဘူတာ -> BGA Rework ရေးစခန်းများ
ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်အထူးပြုကျနော်တို့ BGA Rework ရေးစခန်းများ တွင် Taiwan။ ကျနော်တို့ကုန်စည်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးတောင်းဆိုဖောက်သည်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရမည်, ဒါသူတို့စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဂုဏ်သတင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဘိုးနှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းမှာ OEM သို့မဟုတ်လိမ္ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ကြ၏။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သင်နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များပိုများသောမော်ဒယ်များ, ကျေးဇူးပြု. ချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်ဆက်ဆံရေးရှိလိုပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှာကြ၏သောသှေးမြား၏အနေနဲ့ရည်ညွှန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူသင့်ရဲ့အပြုသဘောတုန့်ပြန်နျဖိုးထားတရကြလိမ့်မည်။
1. Compact ဒီဇိုင်း, အလင်းအလေးချိန် soldering သံနှင့်ပူပြင်းလေကောင်းလေမှုတ်တံအမျိုးမျိုးသောဂဟေတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအမှုအမျိုးမျိုး၌ချစ်ပ်မျိုးကိုဖယ်ရှားပါ။
4. အဆင့်မြင့်အနီအောက်ရောင်ခြည် BGA rework ဘူတာရုံ။
သင်ဂဟေမီ pcb bords သို့မဟုတ် bga ချစ်ပ် preheat ကြကုန်အံ့နိုင်သောလွတ်လပ်သော preheating function ကို, မှုနှင့်အတူ5။
6. အကြီးစားအာဏာနှင့်လျင်မြန်စွာအပူ။ အပူချိန်အဆင်ပြေစွာညှိယူနိုင်ပါတယ်နှင့်အပူချိန်တိကျမှန်ကန်နှင့်တည်ငြိမ်သည်, Airflow ကြောင့်မထိခိုက်။
ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူညှိ 7. Stepless Airflow ။ အပူချိန်အဆင်ပြေစွာညှိယူနိုင်ပါတယ်။
လက်ကိုင်အတွက် 8. ထိခိုက်မခံတဲ့လျှပ်စစ်သံလိုက် inductors ဒါရှည်လျားစွာလက်ကိုင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်မယူနစ်ထောက်ပြကြပါတယ်။ လက်ကိုင်ပုပိုင်ဆိုင်သူအပေါ်ထားသောအခါ, system ကို standby mode ကိုပြန်ပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်။
ဂဟေ / desoldering မျက်နှာပြင်သည်အလွန်ကြီးအလုပ်လုပ်မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ဆားကစ်ဘုတ်ပြားအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကို mount ။ အပူကျုံ့, ခြောက်သွေ့, ယွန်းဖယ်ရှားရေး, viscidity ဖယ်ရှားရေး, ရေခဲထုတ်, Pre-အပူဓာတ်နှင့်ဂဟေကော်များအတွက်သင့်လျော်သော။
က x 260mm 402 x ကို 90